Gen. Diini oo Kenya uga qeyb galaya shir Amni+Sawirro. – SBC
Gen. Diini oo Kenya uga qeyb galaya shir Amni+Sawirro.
Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini iyo wafdi uu hoggaminayo ayaa maanta u ambabaxay dalka Kenya, halkaas oo uga qayb gali doono shir looga hadlayo amniga, waxana wasiirka kusoo sagootiyay garoonka Aaden Cadde saraakiil ka tirsan CXDS.
Wasiirka ayaa sheegay inta uu ku sugan yahay dalka Kenya in uu la kulmi doono saraakiil sare oo dhanka ammaanka ka taagero Soomaaliya, kuwaas oo ay ka wada xaajoon doonaan dar-dargelinta arrimaha Amniga iyo xoojinta taageerada ay dhinaca amniga ay ka siiyaan Soomaaliya.
Dhanka kale. Wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya Mudane C/qaadir Sheekh Cali Diini, Taliyaha Ciidamadda XDS, S/G Daahir Aaden Cilmi iyo Abaanduulaha CXDS, ayaa tacsi u diray S/G Ismaaciil Qaasim Naaji oo xaaskiisa ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho.Waxayna allah uga baryeen in uu jannaadiisa ka waraabiyo ehelkii iyo asxaabtii ay ka baxdayna samir uu ka siiyo.